နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ video conferencing စနဈဖွငျ့ ကငျြးပသညျ့ (၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးနှငျ့ ဒဈဂဈြတယျခတျေတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြား၏ အထူးအစညျးအဝေး တို့သို့ ပါဝငျတကျရောကျ | NLD
Home State Counsellor နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ video conferencing စနဈဖွငျ့ ကငျြးပသညျ့ (၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးနှငျ့ ဒဈဂဈြတယျခတျေတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြား၏ အထူးအစညျးအဝေး တို့သို့ ပါဝငျတကျရောကျ
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ video conferencing စနဈဖွငျ့ ကငျြးပသညျ့ (၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးနှငျ့ ဒဈဂဈြတယျခတျေတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြား၏ အထူးအစညျးအဝေး တို့သို့ ပါဝငျတကျရောကျ
Posted By: mygate wayon: ဇှနျ 26, 2020 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ယနနေံ့နကျ ၈ နာရီတှငျ video conferencing စနဈဖွငျ့ ကငျြးပပွုလုပျသညျ့ (၃၆)ကွိမျမွောကျအာဆီယံထိပျသီး အစညျးအဝေး၏ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနား၊ (၃၆)ကွိမျမွောကျအာဆီယံ ထိပျသီးအစညျးအဝေးနှငျ့ ဒဈဂဈြတယျခတျေတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ အာဆီယံခေါငျး ဆောငျမြား၏ အထူးအစညျးအဝေးတို့သို့ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ ပါဝငျတကျ ရောကျသညျ။
(၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေး၏ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားတှငျ ဗီယကျနမျ ရိုးရာ အနုပညာအကမြားဖွငျ့ ဉီးစှာ ဖြျောဖွတေငျဆကျပွီး အာဆီယံ၏အလှညျ့ကြဥက်ကဌဖွဈသူ ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျ Mr. Nguyen Xuan Phuc က အဖှငျ့အမှာစကား ပွောကွား၍ (၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးကို ဖှငျ့လှဈသညျ။
ဆကျလကျ၍ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ နံနကျ ၈ နာရီ ခှဲတှငျ ကငျြးပသညျ့ (၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးသို့ ပါဝငျတကျ ရောကျသညျ။
ထိပျသီးအစညျးအဝေးတှငျ ဗီယကျနမျဝနျကွီးခြုပျ Mr. Nguyen Xuan Phuc က သဘာပတိအဖွဈ ဆောငျရှကျပွီး၊ ထိပျသီးအစညျးအဝေးသို့ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားမှ ခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ အာဆီယံအတှငျးရေးမှူးခြုပျတို့ ပါဝငျတကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
ထိပျသီး အစညျးအဝေးတှငျ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြားက အာဆီယံအသိုကျအဝနျးတညျ ဆောကျရေး ကွိုးပမျးဆောငျရှကျမှုမြား၊ အာဆီယံ၏ပွငျပဆကျဆံရေး၊ အာဆီယံ၏အခကျြအခြာ ကမြှု ထိနျးသိမျး ရေးနှငျ့ ဒသေတှငျးနှငျ့နိုငျငံတကာရေးရာကိစ်စရပျမြားအပျေါ ဆှေးနှေးအမွငျခငျြး ဖလှယျခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါထိပျသီးအစညျးအဝေးတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက အာဆီယံအနဖွေငျ့ COVID-19 ကူးစကျရောဂါ၏ စိနျချေါမှုမြားကို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးနခြေိနျတှငျ ယခုနှဈ အာဆီယံဥက်ကဌ ၏ ဆောငျပုဒျဖွဈသော “စညျးလုံးညီညှတျ၍ တုံ့ပွနျနိုငျစှမျးရှိသော အာဆီယံ” သညျ ယနအေ့ခြိနျ အခါ၏ လိုအပျခကျြနှငျ့ အလှနျပငျ သငျ့လြျောကိုကျညီမှုရှိကွောငျး၊ မဖွရှေငျးနိုငျသေးသညျ့ ဒသေ တှငျးပွဿနာမြားနှငျ့ အငျအားကွီးနိုငျငံမြားအကွား တငျးမာမှုနှငျ့ ပွိုငျဆိုငျမှု မွငျ့တကျလာခွငျး တို့ကလညျး ဒသေ၏အခငျးအကငျြးကို မတညျမငွိမျ ဖွဈစကွေောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ အာဆီယံ၏ စညျးလုံးညီညှတျမှု၊ အာဆီယံ၏အခကျြအခြာကမြှုနှငျ့ ပွောငျးလဲနသေညျ့ ဒသေတှငျးဗိသုကာ ပုံစံတှငျ အဓိကမောငျးနှငျအားအဖွဈ ပါဝငျသညျ့ အာဆီယံ၏အခနျးကဏ်ဍတို့မှာ ယခုအခြိနျတှငျ ပိုမို အရေးကွီးလာကွောငျး၊ အာဆီယံအနဖွေငျ့ ဆှေးနှေးဖကျနိုငျငံမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးတကျခိုငျမာစရေနျ ၊ ပွငျပမိတျဖကျနိုငျငံမြားနှငျ့ ထိတှဆေ့ကျဆံမှုပိုမိုမွှငျ့တငျရနျနှငျ့ အာဆီယံ၏ စညျးလုံးညီညှတျမှုနှငျ့ အာဆီယံအသိုကျအဝနျးထူထောငျရေးကွိုးပမျးမှုတို့ကို အပွုသဘောဖွငျ့ အထောကျအကူပွုနိုငျမညျ့ အလားအလာရှိသောမိတျဖကျနိုငျငံမြားနှငျ့ ထိတှဆေ့ကျဆံရနျ လိုအပျ ကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့အပွငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက COVID-19 ကူးစကျရောဂါကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ စီးပှားရေးနှငျ့ ပေါငျးစပျဆကျသှယျရေးမှာ မြားစှာ ထိခိုကျသညျဖွဈရာ ကူးစကျရောဂါ၏ ထိခိုကျ နဈနာမှုမြားမှ ပွနျလညျနာလနျထူနိုငျရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကို တိုးတကျခိုငျမာစေ ရနျ အထူးပငျ လိုအပျလကျြရှိကွောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ အာဆီယံအနဖွေငျ့ ကူးစကျရောဂါတုံ့ပွနျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနာလနျထူရေးဆိုငျရာ ထိရောကျကယျြပွနျ့သညျ့ အစီအစဉျတဈရပျ ရေးဆှဲခမြှတျခွငျးကို အရှိနျအဟုနျ မွငျ့တငျဆောငျရှကျရနျ လိုအပျကွောငျး၊ အလားတူ အာဆီယံအနဖွေငျ့ ပွညျသူမြား၏ ယုံကွညျမှု၊ကနျြးမာရေး၊ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးနှငျ့ စှမျးဆောငျရညျတို့ကို ပွနျလညျတညျဆောကျ မွှငျ့တငျရနျ အရေးကွီးကွောငျးနှငျ့ COVID-19 ကူးစကျရောဂါကွောငျ့ မိမိတို့သညျ ဒဈဂဈြတယျ နညျးပညာနှငျ့ ဒဈဂဈြတယျစီးပှားရေးဘကျသို့ အလငျြအမွနျ ကူးပွောငျးနသေညျဖွဈရာ အာဆီယံ အနဖွေငျ့ ဒဈဂဈြတယျခတျေပွောငျးတျောလှနျရေးနှငျ့ ဒဈဂဈြတယျစကျမှု ၄ ဒသမ ၀ တို့နှငျ့ ကငျြ့သားရ၍ အသားကနြိုငျရနျနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ကို အပွညျ့အဝ အသုံးခနြိုငျရနျ လိုအပျကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျ၍ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက ရခိုငျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ မလေးရှားဝနျကွီးခြုပျ၏ ဆှေးနှေးခကျြအပျေါ တုံ့ပွနျပွောကွားရာ၌ ရခိုငျပွညျနယျ၏အခွအေနေ နှငျ့ ပတျသကျ၍ လညျးကောငျး၊ မိမိတို့ဒသေအတှငျး သဟဇာတရှိမှုနှငျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု အလှနျ လိုအပျလကျြ ရှိသညျ့ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍လညျးကောငျး မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ စိုးရိမျပူပနျမှု ရှိကွောငျး၊ လူ့အခှငျ့အရေးသညျ လူသားအခငျြးခငျြးအကွား ကောငျးမှနျသညျ့ဆကျဆံရေး၊ အပွနျအလှနျ လေးစားမှုနှငျ့ အပွနျအလှနျ ယုံကွညျမှုတို့အပျေါတှငျ အခွခေံရမညျဖွဈကွောငျး၊ အာဆီယံတှငျ ဤတနျဖိုးစံနှုနျးမြား ရှိသညျဖွဈရာ မိမိတို့တဈနိုငျငံတညျးကိုသာမက ဒသေတှငျးကို ထိခိုကျစေ နိုငျသညျ့ ပွဿနာကိုဖွဈစေ၊ တဈကမ်ဘာလုံးကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျသညျ့ ပွဿနာကိုဖွဈစေ၊ မိမိတို့ အနဖွေငျ့ အတူတဈကှ ပူးပေါငျး၍ အဖွရှောနိုငျကွောငျး၊ အကွမျးဖကျမှုနှငျ့ လူကုနျကူးမှု ပွဿနာ တို့သညျ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ မိမိတို့ လကျရှိ ရငျဆိုငျနရေသညျ့ အန်တရာယျနှဈခု ဖွဈသကဲ့သို့ ယငျး ပွဿနာနှဈရပျမှာ တဈကမ်ဘာလုံးကို ခွိမျးခွောကျနသေညျ့ ပွဿနာမြား ဖွဈကွောငျး၊ အာဆီယံ အနဖွေငျ့ ယငျးပွဿနာမြားကို မိမိတို့ဒသေတဈခုတညျးအတှကျသာမက တဈကမ်ဘာလုံး၏ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုနှငျ့ သဟဇာတဖွဈမှုကို တိုးမွှငျ့နိုငျစမေညျ့ အပွုသဘောဆောငျသညျ့ နညျးလမျးဖွငျ့ အတူတဈကှ ပူးပေါငျးဖွရှေငျးနိုငျမညျဟု ယုံကွညျကွောငျး ထညျ့သှငျးပွောကွား သညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီတှငျ ကငျြးပ သညျ့ ဒဈဂဈြတယျခတျေတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ အာဆီယံ ခေါငျးဆောငျမြား၏ အထူးအစညျးအဝေးသို့ ပါဝငျတကျရောကျသညျ။
အထူးအစညျး အဝေးတှငျ ဗီယကျနမျဝနျကွီးခြုပျ Mr. Nguyen Xuan Phuc က သဘာပတိအဖွဈ ဆောငျရှကျပွီး၊ အစညျးအဝေးသို့ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံမြားမှခေါငျးဆောငျမြား၊ နယူးဇီလနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ Mme. Jacinda Ardern ၊ ဗီယကျနမျအမြိုးသားလှတျတျောဥက်ကဌ Mme. Nguyen Thi Kim Ngan ၊ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ၏ အမှုဆောငျအတှငျးရေးမှူး Mme. Armida Salshiah Alisjahbana နှငျ့ အာဆီယံအတှငျးရေးမှူး ခြုပျတို့ ပါဝငျတကျရောကျကွသညျ။
အထူးအစညျးအဝေးတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက ပါဝငျဆှေးနှေးရာ၌ သကျဆိုငျ သူ အားလုံးပါဝငျပွီး ကြား-မ သာတူညီမြှမှုရှိသညျ့ အသိုကျအဝနျးကို ဖျောဆောငျရာတှငျ မိမိတို့ အနဖွေငျ့ လမျးပွမွပေုံအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျသညျ့ “ASEAN Declaration on Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development” ကို အပွညျ့အဝနှငျ့ ထိထိရောကျရောကျ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျရနျ လိုအပျကွောငျး၊ ထို့အတူ ဒဈဂဈြတယျ နညျးပညာအခှငျ့အလမျးမြားကို အသုံးပွု၍ အမြိုးသမီးမြား၏ စှမျးဆောငျ ရညျမွှငျ့တငျရေးအတှကျ မိမိတို့၏ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျမှုမြားကို ပိုမိုတိုးမွှငျ့ရနျ အရေးကွီးကွောငျး နှငျ့ ကူးစကျရောဂါအလှနျ အာဆီယံ၏ ပွနျလညျထူထောငျရေးစီမံခကျြတဈရပျ ရေးဆှဲခမြှတျ ရာတှငျ အမြိုးသမီးမြား ပူးပေါငျးပါဝငျနိုငျရေးအတှကျ အခှငျ့အလမျးမြား ပိုမိုဖျောဆောငျပေးရနျ လိုအပျ ကွောငျး အလေးထားထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက အာဆီယံအနဖွေငျ့ ကြား-မသာတူညီမြှမှုကို ဖျောဆောငျနိုငျမညျဆိုလြှငျ ၂၀၂၅ ခုနှဈတှငျ ဂြီဒီပီကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၈ ထရီလြံ ပိုမိုတိုးမွှငျ့ နိုငျလိမျ့မညျဟု ဆနျးစဈလလေ့ာမှုတဈခုက သုံးသပျခနျ့မှနျးထားကွောငျး၊ ဤသို့သော အလားအလာကောငျးမြားကွောငျ့ အမြိုးသမီးမြား၏ ကနျြးမာရေးနှငျ့ သာယာဝပွောရေးကို ကာကှယျမွှငျ့တငျပေးရနျ၊ အမြိုးသမီးမြား၏အခှငျ့အရေးကို လေးစားရနျနှငျ့ အမြိုးသမီးမြား၏ အသံကို ပိုမိုအလေးထားနားထောငျရနျ အရေးကွီးကွောငျး ၊ သို့မှသာ အာဆီယံအနဖွေငျ့ COVID-19 ၏ စိနျချေါမှုမှ လှတျမွောကျပွီး၊ ဒသေနှငျ့နိုငျငံတကာ၏ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုနှငျ့ စညျပငျ ဝပွောမှုတို့အတှကျ အမြိုးသမီးမြား၏အရငျးအမွဈမြားကို ပိုမိုအားပွုနိုငျမညျ့ ကြား-မ သာတူ ညီမြှမှု ပိုရှိသော အသိုကျအဝနျးတဈခုအဖွဈ ပျေါထှနျးလာမညျ ဖွဈကွောငျး ထညျ့သှငျးပွောကွား ခဲ့သညျ။
ယငျးနောကျ (၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးနှငျ့အတူ အာဆီယံခေါငျး ဆောငျမြားနှငျ့ အာဆီယံပါလီမနျညီလာခံကိုယျစားလှယျမြား၏တှဆေုံ့ပှဲ၊ အာဆီယံခေါငျးဆောငျ မြားနှငျ့ အာဆီယံ လူငယျကိုယျစားလှယျမြား၏ တှဆေုံ့ပှဲနှငျ့ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ အာဆီယံစီးပှားရေး အကွံပေးကောငျစီမှ ကိုယျစားလှယျမြား၏တှဆေုံ့ပှဲတို့ကိုလညျး video conferencing စနဈဖွငျ့ ဆကျလကျကငျြးပခဲ့သညျ။
အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ အာဆီယံပါလီမနျညီလာခံ ကိုယျစားလှယျမြား၏ တှဆေုံ့ပှဲ၌ အာဆီယံ၏ လကျရှိဥက်ကဌဖွဈသူ ဗီယကျနမျဝနျကွီးခြုပျ Mr. Nguyen Xuan Phuc နှငျ့ AIPA-41 ၏ လကျရှိဥက်ကဌဖွဈသူ ဗီယကျနမျအမြိုးသားလှတျတျောဥက်ကဌ Mme. Nguyen Thi Kim Ngan တို့က ဉီးဆောငျတကျရောကျခဲ့ကွသညျ။ အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ အာဆီယံ ပါလီမနျမြား ညီလာခံကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျအဖွဈ မွနျမာနိုငျငံကိုယျစား ပွညျထောငျစုလှတျတျောနာယက ဉီးတီခှနျမွတျ ပါဝငျတကျရောကျဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
(၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးတှငျ (၃၆)ကွိမျမွောကျအာဆီယံထိပျသီး အစညျးအဝေးဥက်ကဋ်ဌ၏ကွညောခကျြ၊ စညျးလုံးညီညှတျ၍ တုံ့ပွနျနိုငျစှမျးရှိသော အာဆီယံဆိုငျရာ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြား၏ မြှျောမှနျးခကျြ (ASEAN Leaders’ Vision Statement ona“Cohesive and Responsive ASEAN”) နှငျ့ ပွောငျးလဲနသေညျ့ ကမ်ဘာ့အလုပျသမားရေးရာ ကဏ်ဍတှငျ လူ့သားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာ အာဆီယံကွညောခကျြ (ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work) စသညျ တို့ အပါအဝငျ စာရှကျစာတမျး (documents) (၁၅)ခု ကို ထုတျပွနျ၊ အတညျပွု၊ မှတျတမျးတငျခဲ့ သညျ။
(၃၆)ကွိမျမွောကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးနှငျ့ ဒဈဂဈြတယျခတျေတှငျ အမြိုးသမီး မြား၏စှမျးဆောငျရညျမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ အာဆီယံခေါငျးဆောငျမြား၏ အထူးအစညျးအဝေးတို့ တှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အတူ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ နိုငျငံခွားစီးပှား ဆကျသှယျရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဉီးသောငျးထှနျးနှငျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျတို့လညျး ပါဝငျတကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် video conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေး တို့သို့ ပါဝင်တက်ရောက်
နေပြည်တော် ဇွန် ၂၆
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီတွင် video conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေး၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ (၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်း ဆောင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေးတို့သို့ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
(၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဗီယက်နမ် ရိုးရာ အနုပညာ အကများဖြင့် ဦးစွာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပြီး အာဆီယံ၏အလှည့်ကျဥက္ကဌဖြစ်သူ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား၍ (၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ဖွင့်လှစ်သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် နံနက် ၈ နာရီ ခွဲတွင် ကျင်းပသည့် (၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့င်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များက အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတည် ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ အာဆီယံ၏ပြင်ပဆက်ဆံရေး၊ အာဆီယံ၏အချက်အချာကျမှု ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အာဆီယံအနေဖြင့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေချိန်တွင် ယခုနှစ် အာဆီယံဥက္ကဌ ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “စည်းလုံးညီညွတ်၍ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသော အာဆီယံ” သည် ယနေ့အချိန် အခါ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အလွန်ပင် သင့်လျော်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း၊ မဖြေရှင်းနိုင်သေးသည့် ဒေသ တွင်းပြဿနာများနှင့် အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြား တင်းမာမှုနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု မြင့်တက်လာခြင်း တို့ကလည်း ဒေသ၏အခင်းအကျင်းကို မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ အာဆီယံ၏အချက်အချာကျမှုနှင့် ပြောင်းလဲနေသည့် ဒေသတွင်းဗိသုကာ ပုံစံတွင် အဓိကမောင်းနှင်အားအဖြစ် ပါဝင်သည့် အာဆီယံ၏အခန်းကဏ္ဍတို့မှာ ယခုအချိန်တွင် ပိုမို အရေးကြီးလာကြောင်း၊ အာဆီယံအနေဖြင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်ခိုင်မာစေရန် ၊ ပြင်ပမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုမိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတို့ကို အပြုသဘောဖြင့် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် လိုအပ် ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးနှင့် ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်ရေးမှာ များစွာ ထိခိုက်သည်ဖြစ်ရာ ကူးစက်ရောဂါ၏ ထိခိုက် နစ်နာမှုများမှ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးတက်ခိုင်မာစေ ရန် အထူးပင် လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ အာဆီယံအနေဖြင့် ကူးစက်ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးနှင့် ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဆိုင်ရာ ထိရောက်ကျယ်ပြန့်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ် ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်းကို အရှိန်အဟုန် မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အလားတူ အာဆီယံအနေဖြင့် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှု၊ကျန်းမာရေး၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို ပြန်လည်တည်ဆောက် မြှင့်တင်ရန် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် မိမိတို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဘက်သို့ အလျင်အမြန် ကူးပြောင်းနေသည်ဖြစ်ရာ အာဆီယံ အနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မှု ၄ ဒသမ ၀ တို့နှင့် ကျင့်သားရ၍ အသားကျနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ရခိုင်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ ဆွေးနွေးချက်အပေါ် တုံ့ပြန်ပြောကြားရာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်၏အခြေအနေ နှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ဒေသအတွင်း သဟဇာတရှိမှုနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု အလွန် လိုအပ်လျက် ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ရှိကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးသည် လူသားအချင်းချင်းအကြား ကောင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရေး၊ အပြန်အလှန် လေးစားမှုနှင့် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတို့အပေါ်တွင် အခြေခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံတွင် ဤတန်ဖိုးစံနှုန်းများ ရှိသည်ဖြစ်ရာ မိမိတို့တစ်နိုင်ငံတည်းကိုသာမက ဒေသတွင်းကို ထိခိုက်စေ နိုင်သည့် ပြဿနာကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပြဿနာကိုဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ အနေဖြင့် အတူတစ်ကွ ပူးပေါင်း၍ အဖြေရှာနိုင်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာ တို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိမိတို့ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရသည့် အန္တရာယ်နှစ်ခု ဖြစ်သကဲ့သို့ ယင်း ပြဿနာနှစ်ရပ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံ အနေဖြင့် ယင်းပြဿနာများကို မိမိတို့ဒေသတစ်ခုတည်းအတွက်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်စေမည့်် အပြုသဘောဆောင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် အတူတစ်ကွ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကျင်းပ သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
အထူးအစည်း အဝေးတွင် ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှခေါင်းဆောင်များ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mme. Jacinda Ardern ၊ ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ Mme. Nguyen Thi Kim Ngan ၊ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ၏ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Mme. Armida Salshiah Alisjahbana နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည်။
အထူးအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပါဝင်ဆွေးနွေးရာ၌ သက်ဆိုင်သူ အားလုံးပါဝင်ပြီး ကျား-မ သာတူညီမျှမှုရှိသည့် အသိုက်အဝန်းကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် မိမိတို့ အနေဖြင့် လမ်းပြမြေပုံအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် “ASEAN Declaration on Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development” ကို အပြည့်အဝနှင့် ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာအခွင့်အလမ်းများကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် မိမိတို့၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန် အရေးကြီးကြောင်း နှင့် ကူးစက်ရောဂါအလွန် အာဆီယံ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံချက်တစ်ရပ် ရေးဆွဲချမှတ် ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ် ကြောင်း အလေးထားထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အာဆီယံအနေဖြင့် ကျား-မသာတူညီမျှမှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဆိုလျှင် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ဂျီဒီပီကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈ ထရီလျံ ပိုမိုတိုးမြှင့် နိုင်လိမ့်မည်ဟု ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတစ်ခုက သုံးသပ်ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ဤသို့သော အလားအလာကောင်းများကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးကို ကာကွယ်မြှင့်တင်ပေးရန်၊ အမျိုသမီးများ၏အခွင့်အရေးကို လေးစားရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသံကို ပိုမိုအလေးထားနားထောင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ၊ သို့မှသာ အာဆီယံအနေဖြင့် COVID-19 ၏ စိန်ခေါ်မှုမှ လွတ်မြောက်ပြီး၊ ဒေသနှင့်နိုင်ငံတကာ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် စည်ပင်ဝပြောမှု တို့အတွက် အမျိုးသမီးများ၏အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအားပြုနိုင်မည့် ကျား-မ သာတူ ညီမျှမှု ပိုရှိသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် (၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်အတူ အာဆီယံခေါင်း ဆောင်များနှင့် အာဆီယံပါလီမန်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များ၏တွေ့ဆုံပွဲ၊ အာဆီယံခေါင်းဆောင် များနှင့် အာဆီယံ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တွေ့ဆုံပွဲနှင့် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံစီးပွားရေး အကြံပေးကောင်စီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏တွေ့ဆုံပွဲတို့ကိုလည်း video conferencing စနစ်ဖြင့် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည်။
အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံပါလီမန်ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တွေ့ဆုံပွဲ၌ အာဆီယံ၏ လက်ရှိဥက္ကဌဖြစ်သူ ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Nguyen Xuan Phuc နှင့် AIPA-41 ၏ လက်ရှိဥက္ကဌဖြစ်သူ ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ Mme. Nguyen Thi Kim Ngan တို့က ဦးဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အာဆီယံ ပါလီမန်များ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးတီခွန်မြတ် ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
(၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် (၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးဥက္ကဋ္ဌ၏ကြေညာချက်၊ စည်းလုံးညီညွတ်၍ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသောအာဆီယံဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏ မျှော်မှန်းချက် (ASEAN Leaders’ Vision Statement ona“Cohesive and Responsive ASEAN”) နှင့် ပြောင်းလဲနေသည့် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားရေးရာ ကဏ္ဍတွင် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံကြေညာချက် (ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work) စသည် တို့ အပါအဝင် စာရွက်စာတမ်း (documents) (၁၅)ခု ကို ထုတ်ပြန်၊ အတည်ပြု၊ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ သည်။
(၃၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီး များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေးတို့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်တို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။